Maalinta: Noofambar 14, 2017
Consul General of Georgia Mikaszadze si ay u booqdaan guddoomiyaha gobolka Dogan
Avtandil Mikaszadze, qunsulka guud ee jamhuuriyada Georgia ee Trabzon, wuxuu xafiiskiisa ku booqday gudoomiyaha gobolka Kars Rahmi Doğan. Xiriirka labada dowladood ayaa laga wada hadlay intii lagu gudajiray booqashada maamulka. Gaar ahaan Baku-Tbilisi - Wadada Wadada Tareenka waa mid aad u wanaagsan [More ...]
Agenda ayaa ku yimid Gaziantep
Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Gaziantep Sezer Cihan ayaa cadeeyay in eedeymaha ku aadan warka xun ee ku saabsan safarada gudaha ee saxaafada qaran aysan ka turjumaynin runta iyo in bil walba 4 million [More ...]
Mashruuca Topbas mashruuca Havaray waa la joojiyay
Mashruuca Sefaköy-Başakşehir Havaray waa la kansalay. Nidaamka tareenka dhulka hoostiisa iyo tareenka fudud ayaa la hirgalin doonaa halkii Havaray. Mevlüt Uysal, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul (IMM), ayaa is casilay kadib markii Madaxweyne Tayyip Erdo requestedan codsaday is casilaadiisa. [More ...]
Shaqada waxay ka bilaabantay Mashruuca Marta ee Mahmutbey-Esenyurt
Hawlaha dhismaha ayaa laga bilaabay Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Line kaas oo lasiiyay 2 bilo kahor. Marka la furi doono khadka metrooga, 70 wuxuu u adeegi doonaa kun qof oo rakaab ah hal jiho saacaddiiba. [More ...]
Duqa Kartepe Hüseyin Üzülmez oo shir jaraa'id ku yidhi ku saabsan mustaqbalka ee mashruuca ropeway ah si loo ogaado dhowr maalmood ah oo ku saabsan 31 sheegay in loogu tala galay in ay mashruuca ku dhameysan ilaa December 2018 gudahood [More ...]
TCDD (KPSS 2017 / 2) Codsiga Codsiyada
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) ayaa soo saaray war qoraal ah oo loogu talagalay musharax oo doonaya in ay ka gaabsadeen-meelaynta 2017 2 KPSS ee hay'adaha. Waa tan ku dhawaaqida ay sameysay TCDD; Murashaxiinta Meelaynta KPSS 2017-2 ee raba inay doortaan shirkaddeena [More ...]
TUDEMSAS diyaar u ah baabuurka gudaha
Madaxa Laanta Gaadiidka -Maxamed Sivas La Taliyaha Madaxweynaha Omer Vatankulu, TUDEMSAS Faa'iidada soo saarista gawaarida guryaha ayaa la bilaabi doonaa, '' Warshadeena ayaa diyaar u ah, '' ayuu yidhi. Gawaarida 'Vankankulu,' 'Kacaanka, ayagoo siinaya ruuxa TUDEMSAS, Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan [More ...]
Gaadiidka TCDD Gaadiidka 2017 Sanadki Guddiga Maareynta Hay'adaha Hormarinta Held
Kulankii ugu horreeyay ee guddiga maamulka ee 2017 waxaa lagu qabtay inta u dhexeysa Sarkaalka Gaadiidka-Sen iyo Agaasimaha Guud ee Gaadiidka TCDD Inc. Kuxigeenka Maareeyaha Guud ee Gaadiidka Inc. Çetin Altun ayaa gudoomiyay kulanka wakiilka guud [More ...]
Van Metropolitan wuxuu diyaariyaa Xarunta Xilliga Xilliga Qaboobaha
Xarunta Abalı ee ku taal degmada Gevaş ee Van waxaa hagaajiyay dowladda hoose ee magaalada. 14 oo ay sameysay ururka argagixisada PKK Bishii Agoosto 2015 gudaha Abalı Ski Center ee Gevaş, oo ku hubeysan awood badh tan iyo 2016 [More ...]
General Directorate of State Tareennada ee Jamhuuriyadda Turkey samayn doonaa wixii 363 dugsiga ugu yaraan sare qalin qorista sarkaalka. Xisaabinta KPSS 2017 / 2 iibsiyada ayaa dhammaanaya. Waa tan faahfaahinta. KPSS 2017 / 2 La doorbiday [More ...]
Go'aanka qandaraaska ee TCDD ee Saldhigga Kırklareli, astaanta taariikhiga ah ee 100 ee sanadlaha ah ee Kırklareli, ayaa kacday dadka reer Kırklareli. TCDD 1 ee loogu talagalay Dhismaha Saldhigga Kırklareli, oo astaan ​​u ah Kırklareli, sanado badan lama adeegsan. Agaasime Goboleed [More ...]
Shil tareen oo ka socda Congo: 34 ayaa dhintay
In kabadan 34 qof ayaa ku dhintey shil tareen oo ka dhacay Koonfur bari Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. In kabadan 34 rayid ah ayaa naftooda ku waayey koonfurta bari ee dalka. Georges Kazadi, oo ka mid ah saraakiisha gobolka Lubudi, ayaa xamuul xamuul ka qaadanaya Luumbia una sii jeedda Lubumbashi. [More ...]